Ka Google Nexus beddelashada Data si iPhone
Iibsaday iPhone cusub oo ka walwalsan tahay sida aad u si ay u gudbiyaan karo files ka Google Nexus jir? Iyadoo Nexus leeyahay jiidashada u gaar ah oo ku wareegsan, aad rabto in laga yaabo in ay isku dayaan ka soo iPhone ah. Sidaas, sidee ayaad u nidaamka oo dhan ee files ka Nexus u gudbaayo iPhone badan oo dhan ka fudud?
Mase ka mid smartphone in kale waa had iyo jeer xiiso leh, laakiin waxay noqon karaan kuwo niyad-jab marka ay timaado in xog phone cusub wareejinta. Kala beddelashada xogta laga Android inay Android ama macruufka in macruufka adkaan kartaa in yar oo had iyo jeer, oo aad si fiican u qiyaasi kartaa sida ay u adag iyo waqti waxa ay noqon kartaa in aad xogta ka soo telefoonada ah Android wareejiyo macruufka, haddii aan si fiican loo sameeyo.
Arrimaha ku saabsan wareejinta xogta laga Google Nexus si iPhone
Halkan waxaan ka hadleynaa wareejinta xogta laga Google Nexus si iPhone. Labaduba waa telefoonada caan ah laakiin waxay u isticmaali OS kala duwan, oo halkan ka functionalities ku kala duwan yihiin. Iyadoo wareejinta xogta laga Google Nexus si iPhone aad la kulmi kartaa soo socda arrimaha:
1. Sida labadaba waa OS oo kala duwan, ma jiraan wax taageero waafaqsan si ay u gudbiyaan nooc kasta oo xog marayo habka hal-tallaabo ah.
2. Waxa aan macquul aheyn si ay u gudbiyaan xogta laakiin waxa ay qaadataa habka dheer oo ay ku jiraan dhawr talaabo si ay u gudbiyaan xogta si aad telefoon.
3. Data sidoo kale waa nooc oo kala duwan, sida music, videos, xiriirada iyo qaar badan. Waxaad heli doontaa si ay u qabtaan tallaabooyinka kala duwan si ay u gudbiyaan noocyada kala duwan ee xogta.
4. Haddii size xogta waa weyn yahay, ka dibna waxa suurtagal ah in suuqa kala iibsiga ay qaadan doontaa waqti. Si kastaba ha ahaatee, waxay ku xiran tahay xiriir aad internet iyo baaxadda xogta.
5. Waa in aad la account Google shaqeeyaan iyo warsan iCloud si ay u kala iibsiga.
Xal Easy: 1 click in xogta laga Google Nexus wareejiyo iPhone
MobileTrans Waa software ka dhigaya habka niyad aad u fudud aad u. Waxaa wareejin karaan xiriirada, sawiro, fariimaha qoraalka ah, videos, music, jadwalka, barnaamijyadooda, abuse call iyo iyadoo hal click. Waa boqolkiiba boqol nabad ah oo khatar la'aan. Waxaa wareejin karaa inta u dhaxaysa nidaamka qalliinka kasta iyo dib ilaa xisaabaadka.
Halkan waxa ku jira muuqaalada Wondershare MobileTrans:
1. Waxay ku wareejinaya xogta u dhexeeya macruufka, Android, Microsoft, iyo Nokia Symbian iyadoo hal click. Waxa ay taageertaa in ka badan 3000 telefoonada badan shabakadaha kala duwan.
2. Waxaa awoodo gurmad content iyo soo celin tayada asalka. Waa boqolkiiba boqol nabad ah.
3. Haddii ay dhacdo in aad rabto in aad iibiso telefoonka jir, aad masixi aad dhamaystiran xogta ka dib markii aad wareejiyo aad telefoon cusub. Sidaas darteed, waxaad ka ilaalin kartaa warbixin-shaqsiyeedkaaga.
4. interface gabi ahaanba waa mid fudud oo qaataa laba-saddex daqiiqo si ay u sameeyaan kala iibsiga.
Talaabooyinka in xogta laga Google Nexus wareejiyo iPhone oo isticmaalaya Mobile Trans
Iyadoo Wondershare MobileTrans xogta wareejinta, waa u fududahay. Just download software ka Wondershare website-ka. Version Trial A ayaa diyaar u ah version xor ah oo buuxa waxa laga iibsan karaa. Halkan waxa ku jira talaabooyin muujinaya sida aad wareejin karaan xogta ka Google Nexus si iPhone:
1. Burcad software ka daaqadaha ama Mac PC aad.
2. screen soo socota, waxaa lagu weydiin doonaa in ay ku xidhmaan labadaba telefoonada. Connect aad Google Nexus iyo iPhone.
Si toos ah 3. Software ogaan doonaa telefoonada ah. Hubi in aad isha waa Google Nexus iyo meel loo ahaadana iyadaa waa iPhone. Haddaba tag ilaa dhexe iyo dooro content aad rabto in aad nuqul ka Google Nexus.
4. Waxaa jira hal doorasho ku hoos iPhone. Marka hore, hubi in haddii ay jirto xog ku saabsan iPhone ka hor ka - waxaad u baahan tahay in ay iska cadahay haddii ay jirto. Haddii waxa hadda ka jira macluumaadka ku yaal, waxaad dooran kartaa fursad u 'oo cad cad xogta hor nuqul'. Ay u badan tahay waxaad u baahan doontaa Doorashadan haddii aad iibsaday iPhone loo isticmaalo. Tani waxay baabi'in doontaa xogta jir aad boos qaadashada iPhone saxiixa cusub. Waad ka boodi kartaa talaabo haddii aad isticmaalayso iPhone cusub.
5. Hadda oo dhan si aad u samayso waa guji Start Copy. Tani waxay bilaabi doonaa geeddi-socodka xogta ka Google Nexus si iPhone wareejinta. Waqtiga lagu qaato ee suuqa kala iibsiga ku xiran tahay tirada xogta guud.
Ha ka shaqeeyaan wax kasta oo ka mid ah telefoonada ilaa kala iibsiga waa dhameystiran yahay. Haddii sidaa la sameeyo waxay macnaheedu noqon kartaa in aad jeclaan lahaa in ay dib uga bilowdo nidaamka oo dhan mar kale. Marka iibsiga dhamaato, waxaad ka jari kartaa telefoonada aad ka PC. Hadda waxaad eegi iPhone, waa in lagu qaado xogta cusub ka Google Nexus.
Waa kuwee Google Nexus Ma isticmaashaa Maraykanka ee?
Google Nexus waa mid ka mid ah casriga ah Android caanka ah ee USA. Google ayaa lagu soo koraya telefoonka taasi oo ay iskaashanayaan saarayaasha kala duwan sida LG iyo Motorola. Halkan waxa ku jira telefoonada Nexus ugu sareeya ee USA:
Waa mid ka mid ah telefoonada-dhamaadka sare ee USA ayaa racfaan design, OS ugu danbeeyay, iyo qaabeynta oo hagaya. Waxaa la tixgeliyaa sida telefoonka ugu fiican Nexus la isku darka weyn ee hardware iyo software.
Dadka raadinaya telefoonka ee safafka bartamihii, Google Nexus 5 16 GB waa iibsan ugu fiican. Waxay ahayd telefoonka ugu horeeyay ee la iman KitKat, pedometer iyo daaha HD buuxa.
Phone waxaa loo soo saaray by LG, oo la yimaada stock Android 4.2. Inta lagu jiro iyo markii la bilaabay in ay ahayd telefoonka ugu dhaqsiyaha badan ula 8 camera MP in ay kala duwan.
Wixii phone-dhamaadka sare ah, kuwii ku caashaqi jiray Nexus 5 ayaa ahaa dooqa ugu horeysay oo ay ku raran stock Android 4.4 KitKat.
Iyadoo rating sare ah 96 ka mid ah 100, telefoonka ayaa hardware awoodda sare isku jira oo awood badan iyo software. Waynayn, waa dhinaca qaali ah laakiin waxa ay si fiican u qalantaa.
> Resource > iPhone > Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga Google Nexus si iPhone